शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिनु काउन्टरबाट डलर साटेजस्तो होइन
सरकारले स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदानमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले ब्याज अनुदानमा ७ प्रकारका कर्जा बैंकमार्फत पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधिभित्र रहनु पर्नेछ । यसका लागि समेत यसको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयनका चुनौती लगायत विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानी :
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ भदौ २१ गते सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई लागू भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले शुरुआतमा नै १६ जनालाई यस्तो कर्जा वितरण गरेको थियो, अन्य बैंकहरूको स्थिति के होला ?
यो कार्यविधि अनुसारको सहुलियतपूर्ण कर्जा तिहारपछि दिन शुरू गरेका छौं । नेपाल बंगलादेश बैंकलगायत अन्य बैंकहरूले पनि यस्तो कर्जा प्रदान गर्न शुरू गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी लगायतले सूचना जारी गरेर कर्जा लिन आउन अनुरोध गर्‍यौं । कर्जा आवश्यक हुने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा कर्जा लिन तोकिएको प्रावधान पूरा गरिसकेपछि कर्जा पाइन्छ । शुरूमा पूर्वको तेह्रथुमबाट यस्तो कर्जा वितरण गर्न शुरू गरियो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न नेपालभरका सबै शाखालाई अधिकार दिइएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक, सानिमा, एनआईसी, नबिल, लक्ष्मीलगायत बैंकहरूले कर्जा प्रवाह शुरू गरिसकेका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
अहिलेसम्मको अनुभवमा विभिन्न ७ किसिमका कर्जामध्ये कृषि कर्जाका लागि धेरै माग रहेको देखियो । यसबारे काम भइरहेको छ । कार्यविधिले सहुलियत कर्जा र व्यवसायमा बीमा अनिवार्य गरेकोले यो सुरक्षित छ ।
2019-01-22 - 239 view(s) - abhiyan